Pottermore စာရေးဆရာများ၏မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ဥပမာတစ်ခု? | eReaders အားလုံး
ဟယ်ရီပေါ်တာပြန်ရောက်လာတဲ့ဒီအချိန်မှာ၊ ကျန်ရှိသောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှာ Pottermore ဖြစ်သည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သည် JK Rowling ပိုင်ဆိုင်သည့်တရားဝင် Harry Potter ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ ဟယ်ရီပေါ်တာအတွက်အခွင့်အရေးများအားလုံးပါ ၀ င်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်လည်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်အရေးကြီးဆုံးမှာ ဟယ်ရီပေါ်တာစာအုပ်များ၊ စာအုပ်များနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များရောင်းချသောဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်.
ယနေ့ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဟယ်ရီပေါ်တာစာအုပ်ကိုရယူရန် (သို့) Saga မှပစ္စည်းအသစ်များရယူရန်ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားကြသည်။ ထိုပစ္စည်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူတို့ယုံကြည်စေလိုသကဲ့သို့အသစ်အဆန်းမဟုတ်ဟုထင်ရသော်လည်း
ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ Pottermore ကိုမပြချင်ပေမယ့်အယ်ဒီတာ့အာဘော်အနေနဲ့ဗဟိုပြုပါ။ များစွာသောသူတို့က Pottermore သည်ဟယ်ရီပေါ်တာ၏လက်ရာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောထုတ်ဝေသူသို့မဟုတ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကိုတရားဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြသည် အဲဒါကိုကျွန်တော်မီးမောင်းထိုးပြချင်တာပါ။
လောလောဆယ်လူမှုကွန်ယက်များနှင့် ဝဘ်စာမျက်နှာများဖန်တီးခြင်းသို့မဟုတ် ebooks များဖန်တီးခြင်းသည်မည်သူ့ကိုမျှလက်မခံပါ ငွေအမြောက်အများဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲ။ ယင်းကသူတို့ကိုထုတ်ဝေသူများသို့မဟုတ်စာရေးသူများကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်သော ebook များထုတ်ဝေရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်စစ်မှန်သောပလက်ဖောင်းများဖြစ်စေသည်။
Pottermore သည်ဟယ်ရီပေါ်တာအောင်မြင်မှုသည်စာအုပ်တစ်အုပ်ရောင်းချခြင်းထက်ကျော်လွန်သွားသောကြောင့် JK Rowling မှထိန်းချုပ်သောရိုးရှင်းသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်မဟုတ်ပါ။ စာရေးသူတစ် ဦး သည်အလားတူအရာတစ်ခုခုကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူ၏အခန်းကဏ္ the သည်လက်ရှိလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားပုံရသည်၊ ၎င်းသည်လှုပ်ရှားမှုများသည်ယခုသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအားလုံးနှင့်မတူနိုင်သည့်ပုံရှိသည်။
စျေးကွက်တော်တော်များများနှင့်စာရေးဆရာများသည်ဤကိရိယာအမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုကြသည် အယ်ဒီတာနှင့်သူ၏ကော်မရှင်ကိုကျော်လိုက်ပါစာရေးဆရာအတွက်တကယ်အကျိုးရှိလား။ ရေရှည်တွင်ထုတ်ဝေသူ၏ကော်မရှင်သည်စာရေးဆရာများစွာပြုလုပ်သောအမှားအယွင်းများဖြစ်သည့်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ဝေမှုစင်တာများအတွက်ပေးဆပ်ရသည့်ပမာဏနှင့်မကြီးမားပါ။ သို့သော်အချို့သူများသည်ကျွန်စနစ်ထက်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ဝေခွင့်ပြုထားသည့်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်မှာအမှန်ပင် ထုတ်ဝေ၏။ တူညီသောအကြွေစေ့၏နှစ်ဖက်သည်လက်ရှိတွင်အတော်လေးအငြင်းပွားဖွယ်ရာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါပေမယ့်မင်းကော မင်းဘာကိုပိုနှစ်သက်တာလဲ ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ဝေမှုသို့မဟုတ်အယ်ဒီတာအဖွဲ့လား။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » Pottermore စာရေးဆရာများ၏မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ဥပမာတစ်ခု?
Ebooks နှင့် eReaders များသည်ကျဆင်းနေပြီ၊